Global Voices teny Malagasy » Fandevenana Nitondra Ireo Mpitaky Fanovàna Ao Syria Hankany Am-piangonana Niaraka Taminà Raozy Mena · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Septambra 2014 3:08 GMT 1	 · Mpanoratra مرسيل شحوارو Nandika (en) i Lara AlMalakeh, Tantely
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Syria, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika, Ny Tetezana - The Bridge
Tamin'ny fandevenana ny renin'i Marcell Shehwaro, tonga nanatrika, nanao akanjo fotsy ary nitazona raozy mena teny an- tànany, ireo namana sy mpitaky fiovàna rehetra avy any Aleppo.
Ampahany amin'ireo andian-dahatsoratra manokan'ilay mpitoraka bilaogy sady mpikatroka mafana fo, Marcell Shehwaro, ity lahatsoratra ity, mampiseho ny fiainana misy marina any Syria mandritra ilay fifandirana mitam-basy amin'izao fotoana izao, eo amin'ireo hery mpiara-dia amin'ny fanjakana ankehitriny, sy ireo mitady hanaisotra azy io.
Mety efa nototofako tamin'ny antsipirihan'ny fahavoazako samirery angamba ianareo, nilazako taminareo tao amin'ny lahatsoratra teo aloha ny tantaran'ny reniko sy ilay mpamono olona nirongatra ato anatiko taorian'ny namonoana azy. Fa androany, tsy mino aho hoe afaka ny hilaza ny zavatra miseho ao Syria raha tsy milaza aminareo ny ranomason'ireo tra-boina sy ny fahoriany.
Androany, holazaiko aminareo ny alina nitrangan'ilay loza.
Taraiky nikirimbarimba tany an-tranon'ny namako aho, niresaka ny hevitra ho an'ny fiovàna, raha naneno ny findaiko. Reko tao ny feon'ny anabaviko feno tahotra: “Any amin'ny hôpitaly i mama, voatifitra izy.”
Tao anatin'ireo minitra vitsy nandehanako hankany aminy, maro ny eritreritra nibosesika tao an-dohako tao. Ho tafavoaka amin'io ve izy? Izaho ve no tokony hohelohina amin'izany fahoriana rehetra izany? Novonoin'izy ireo ve izy satria reniko? Mba hiarovako ny tenako amin'ny fanamelohan-tenako, naniry mafy aho hoe tokony mba izaho no voatifitra. Balanay ve no nanaovany izany?? Sa balan-dry zareo? Tsy fantatro. Tamin'izany, tsy noeritreretiko akory hoe misy fahasamihafàny hoe antokon'iza ny nahavanona ilay fahafatesana. Rehefa tonga tany amin'ny hôpitaly aho, noeritreretina ho izaho no hanao ny fanekena ny fanapahankevitra raha tokony handidy azy izy ireo, nefa talohan'ny valintey tokony nomeko, nilaza tamiko izy ireo fa maty izy. Natao maritiora tamin'io daty io ny reniko.
Tsy haiko hoe ahoana no nahavitàko nanary haingana be ny maha olona ahy. Notazoniko ho an'ny any aoriana izany. Tsy nitomany be araka ny faniriako aho: feno ilay resaka revôlisiôna ny eritreritro, io no hazo fijaliako, ny iray – sahala ny an'ireo Syriana an'arivony – tokony ho entiko, ka iza moa aho no hitaraina? Tao anatin'ireny fotoana ireny, nahatsiaro ny fitiavan-tenako samirery aho. Tsapako ny faharatsian'ny tahotra niainan'ny reniko isaky ny mandeha mamonjy fihetsiketsehana iray aho – izay nahitàny zavatra holazaina hatrany avy amin'ny fitafy “tsy mihaja” hanaovako, na avy amin'ny hafaliako rehefa tafaverina ao an-trano aho, na vokatry ny tsy fahafahako na tsy finiavako handainga aminy, ary indrindra ny hiatrika ny fahafatesako. Tsy haiko hoe aiza no nandevenako ny fihetseham-poko, na hoe taiza no nahitako vahaolana nahatonga ahy hanapa-kevitra ny tsy hangina, ary na dia taorian'ny fahafatesan-dreniko aza, hitohy ho zanaka vavin'ilay revôlisiônako aho, tsy ho laitran-dranomaso, tsy ho laitran'ny fanapempoana.
Vao maraina ny ampitson'io, nila nandeha niresaka tany amin'ilay mpitandro filaminana niandraikitra ny fandriampahalemana tao amin'ny faritra nahafaty ny reniko aho. Mpamono olona ankitsirano izy, mitovy amin'ny fitondrana nametraka azy teo ihany. Tsy mba niala tsiny akory izy. Nolazainy tsy tamim-piraharahiana ho toy “fahadisoan'olombelona” fotsiny ilay famonoana, sahala amin'ireo fahadisoan'olona an'arivony nisy nanerana ny firenena, ny fanandinoana, na fodiana nanadino fa io “fahadisoan'olombelona” lazainy io anie ka reny, tantaram-pitiavana iray, famindram-po sy fahatsiarovana, firenena ho an'ny fianakaviany. Fa zatra mamono firenena ireo olona ireo, koa inona no vaovao amin'izany?
Avy eo, lasa lasibatry ny fampitandreman'ny olona rehetra aho, amin'ny zavatra tokony ataoko sy ny zavatra tsy tokony teneniko, amin'ny tahotra mandeha ao amin'ny fianakaviana, any anaty fiarahamonina. Na dia lehibe aza ny fahavoazako, nipetraka tery an-joron-trano aho ary nitsetra azy ireo noho izy ireo lasa andevon'ireo kiboriborin-tahotra ireo; ireo tena namana akaiky teo aloha. Nitsetra ny lasa naha andevo azy ireo aho ary nitia azy ireo fatratra ka naniry azy ireo ho afaka. Amiko indray, izay nitàna ny ranomason-dreniko, raha sanatria aho lasa maritiora teo, efa afaka tamin'io tahotra io aho.
Tao an-dohako, nihira ireo hiran'ny revôlisiôna aho, ireo hira izay tsy atsahatro tanisaina isaky ny miha sarotra ny fiainana. Isaky ny tia hahatsiaro hoe iza marina aho, manamboatra toerana miaro ny manodidina ahy aho. Nihira izany hira tsy tian'ny reniko izany aho: “Andeha hivoaka aho hanao hetsi-panoherana miaraka amin'ny fanahiko sy ny tanako/Ary raha miverina aminareo lasa maritiora aho, ry Neny, aza mitomany.”
Tena maneso ny fiainana. Zatra niatrika ny fahafatesana efa ho isan'andro aho, nanao fihetsiketsehana tamin'ireo toerana faran'izay mampidi-doza indrindra, voatifitra mivantana—ary mbola velona ihany aho fa izy kosa maty?
Ny andron'ny fandevenana, nila nieritreritra ny zavatra rehetra aho. Ahoana ny fiangonana no lasa toerana mikolokolo ny toetra mendrik'ireo rehetra mpitaky fanovàna na avy aiza na avy aiza no niaviany ? Ary ahoana no anaovako ny revolisiôna sahala amin'ny tsara indrindra amin'ireo vehivavy ampakarina, ho an'ireo izay nanana fitsaràna hoe resaky ny olona tsy mety miova hevitra ny revôlisiôna, ary tsy misy toerana ho an'ny zavatra hafa, ary nametraka elanelana noho ny tahotra izy ireo.
Izany no nahafahako nisafidy ny fotsy sy ny mena. Nangataka ireo revôlisiônera aho mba hiakanjo fotsy, loko miavaka kely amin'ireo namana sy fianakaviana Kristianina izay hiakanjo mainty satria izay ny fomba fanao amin'ireo fandevenana Kristianina. Nangataka ireo revôlisiônera tsirairay ihany koa aho mba hitondra raozy mena ho fanehoany ny fiaraha-miorin'izy ireo amin'ny fomba mora ho azo sy tian'ny olona rehetra.
Tamin'ny fidirana tao an-trano fiangonana, saika nikorontana ihany aho nahita fiara lehibe feno mpitandro filaminana. Tsy fantatro hoe nahoana ny fandevenana ny reniko no ilàna fisianà mpitandro filaminana mitam-basy. Saika nampivaralila ahy izany rehetar izany, raha tsy noho ny fahafotsiana mangatsakatsaky ny revôlisiôna izay nanodidina ahy. Tsy fantatro hoe avy aiza daholo ny niavian'ireo vahoaka rehetra ireo, fa nitondra ahy ho tony sy hilamina ny fitiavana sy ny fanekena nentin'izy ireo. Tonga ireo revôlisiônera nitafy akanjo fotsin-dry zareo nameno ny tohotohotry ny fiangonana, nanandratra ho ambony tsara ireo raozy fotsy nentiny, nihiaka ny fahalalahana tao anatin'ny fahanginana ary fanajàna. Maso an-jatony mijery ahy, miandry ny famantarana avy aty amiko hanova io ho hetsi-panoherana, fa nanaja ny fahoriako sy ny fanapahan-kevitro izy ireo.
Tsy fantatro mazava tsara hoe firy izy ireo no teo, fa tamin'io andro io, reko nitongilana taty amiko ireo mpitraotran'i Aleppo ary nanoroka ny handriko, namafa ny ranomasoko tsirairay avy. Tamin'io andro io, nahafantatra ny dikan'ny andianà revôlisionera niditra am-piangonana voalohany indrindra aho, mba hiaraka amiko fotsiny, mba hitondra fiaraha-miory amiko; ny dikan'ny vehivavy nisaron-doha nipetraka teo amin'ny dabiliom-piangonana ary tsy nahatsapa tena ho adala na hafahafa, satria tsy irery izy tao. Fantatro hoe nona no dikany rehefa ry zareoilay miteny hoe “mampiray ny Syriana” ny revôlisiôna.
Raha nangalatra izay ambiny tafajanona tamin'ny fianakaviako ny fitondrana, ny revôlisiôna kosa nanome ahy fianakaviana afaka manome fitiavana tsy misy takalony. Ny olona rehetra afaka miresaka momba ny fifaliana any amin'ny sekta, ary manao fitarainana momba ny tena anton'ny fifandirana Syriana, saingy, raha tena zohiana lalina, mino aho fa namoaka antsika rehetra avy tao anatin'ny akora an'arivony nahazatra niafenana hatrizay io revôlisiôna io. Nampitambatra antsika ary nanavao antsika tamin'ny heriny ilay fahoriana.
Raozy an-jatony no nanatona niaraka tamin'ireo nitàna azy. Naniry ny hisaotra ny tsirairay amin'izy ireo aho. Naniry ny hiteny amin'izy ireo aho hoe tena mafy tokoa ny fahoriana raha tsy teo izy ireo. Naniry ny haka ny hanitr'ilay Aleppo tsara indrindra tao amin'ny ranomasony aho, ary manolotra ity lahatsoratra ity ho azy ireo, na ho an'ireo olona sasany ao amin-dry zareo ka mbola miaraka aminay, satria efa maty tamin'ny fiarovana ny fahalalahana ny maro tamin'ireo mpitaky fanovàna ireo.
Nitsiky tamin'izy ireo aho, nirehareha tamin'ilay revôlisiôna niteraka ireo maherifo ireo. Nitsiky tamin'izy ireo aho, niezaka mafy ny hanakona ny ranomasoko tamin'ny hery miafina, satria mila “manindry mafy ny ratrantsika isika ary mitraka ambony” mba hamaly faty ny ràn'ireo maritiora, ny ràn'ny reniko, ny an'i Mustafa sy an'i Mahmoud. Voady noraisintsika izany: “Tsy hanadno velively ny ràn'ireo maritiora isika”.
Nanakaiky ny vatam-paty izy ireo, izy rehetra, ary miaraka amin'ny fitoniana tsara, nametraka ny voninkazony teo amin'ny fasan'ny reniko izy ireo. Niantso azy aho, tao anatiko: “Neny, aza misahirana amiko, Syria no reniko”.
Nankany amin'ny fasana izahay, nanodidina ahy izy ireo, nitondra ny fahoriako ka lasa maivamaivana amiko ny nitondra azy. Avy eo, nijanona niaraka tamiko izy ireo, nanatrika fombafomba sy fivavahana nandritra ny adiny iray sy sasany, izay tsy azon'izy ireo na tsy nikasika azy ireo hatrizay. Tsapako fa nilain'izy ireo ny nivavaka tahaka izany, tamin'ny fomban'izy ireo. Nangatahako izy ireo hamaky ny Fatiha  ho an'i Neny. Fantatro fa tany anatin'ny fon'izy ireo tsirairay avy, misy fahadiovana ampy tsara handrian'ny fanahin'ny reniko am-piadanana. Nivavaka niaraka tamin'izy ireo aho, tamin'ny finoako sy ny azy ireo.
Lehibe tokoa ny trosa tokony hefaiko amin'izy ireo, lalina ny fankasitrahako ny fiantràn'izy ireo, ary lafo amiko ny ranomaso rehetra nalatsany niaraka tamiko, ary lavitra, tena mbola lavitra, ny làlana tokony mbola hiarahanay, miaraka amin'ireo efa lasa.
Mibilaogy ao amin'ny marcellita.com  i Marcell Shehwaro ary mibitsika ao amin'ny @Marcellita , samy amin'ny fiteny arabo no voalohany. Vakio ato  ny lahatsoratra hafa ao anatin'io andiany io.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/09/23/64036/